म छुच्ची भएर तिमीलाई के भो ?
शुक्रबार, २९ बैशाख, २०७४
सामसुङ मोबाइलको रिङ टोन बजिरहँदा सुतिरहेकी थिएँ । निन्द्रा लागेर होईन चिन्ता लागेर । केही कुराको चिन्ता लाग्यो भने दिनमै पनि सुत्ने नराम्रो बानी छ । कसैले नराम्रो भन्दा होस् या तनाव हुँदा सुतेर उठेपछि बल्ल समस्याको समाधान पाउँछु । पहिलोपटक फोन काटेँ ।
लगातार घण्टी बजिरह्यो । फोन उठाएँ, ‘हेल्लो, के गर्दै ?’
‘सुत्नलाई रात नै पर्नुपर्छ र ? कस्तो मिठो सपना देखिराथेँ ! को हो फोन गरेर डिष्टर्ब गर्ने ?’ केही झर्केरै भनेँ मैले ।
‘उल्लु हो क्या तिमी ? दिनमा सुत्ने, रातभर जाग्राम बस्ने ?’ अधवैंशे युवकको धोद्रो आवाजले सोध्यो ।
‘मान्छेलाई कल गर्या हो की उल्लुलाई ? मिस्टर ! नम्बर चेक गरेर फेरि डायल गर ।’
जोसुकै होस् ‘तिमी’ नै दन्काईदिएँ मैले । पहिलो भेट या फोन कलमै कोही अपरिचित केटाले तिमी भन्न हुन्छ भने हामीले भन्न किन हुँदैन ।
‘कस्तो ठाडो प्रश्न नरम भएर बोल्न आउँदैन ?’ उसले फेरि ल्याङ ल्याङ गरिरह्यो ।
‘ब्वाईफ्रेन्ड हो र तिमी ! फकाई–फकाई बोल्नलाई ।’
भविष्यमा भए भने नि !’ उ झनै लाडिएर बोल्न खोज्यो ।
‘उफ ! कस्तो गिद्धी गरिराको के ? भविष्यमा त म पनि प्रधानमन्त्री भए भने नी ! चन्द्रमामा पुगेँ भने नी । भयो भने अंगोलोमा बेरुम्ला, चुप्पा दिम्ला, घुम्न जाम्ला ।’
‘ओ !’ म दंग परेँ । बेस्सरी हाँसेँ पनि । ‘कस्तो फन्नी’ हाँस्दा हाँस्दै झण्डै खाटबाटै लडिन ।
‘राजनीतिक दलको घोषणा पत्रजस्तै हो क्या ? सपना मात्र देखाउने ?’ उसले सोध्यो । ‘खोई बुझ्दिन् म राजनीति,’ मैले झर्को माने झैँ जवाफ फर्काएँ । मस्त लागेको निन्द्राबाट ब्युँझाइदियो मोरोले । मनमनै रिस उठ्यो । किन कल गर्या ? अनि को हो तिमी ? प्रश्न यथावत थियो । ‘बाबा अनि आमाको छोरो । दिदिको भाई । मनपराउँछु तिमीलाई ।’
‘फन्टुस्, नाम के हो ? कहाँ बस्छौ ? के गर्छाै पो सोध्या’ भनेँ मैले । ‘किन हतार आजै ? अर्काे दिन भन्छु है, तिमीसँग बोल्दा नाम नै बिर्सिएछु ।
दुई दिनपछि त्यही नम्बरबाट कल आयो । बिहानको समयमा । त्यति बेला पनि बिस्तारामै थिएँ । ‘हेल्लो डियर के गरिराको ?’ अघिल्लो फोनमा जिस्किएर त्यती भन्दिएको त डियर नै भन्ने हिम्मत कसरी आयो । अलि बढी बोल्यो भने ‘यो केटी मसँग पटिइहाली’ भन्ने सोच्छन् केटाहरु ।
‘मेरो मन दुख्छ नी’
‘अहिलेसम्म कतिवटा केटीलाई ट्राई मार्दा दुख्यो तिम्रो मन ?’
‘तिमीनै हो पहिलो, जसले यति ठाडो उत्तर दिएर मेरो मन दुखायौ ।’
‘सेम फर्मुला इउज नगर न यार । अली एक्स्ट्रा हुन सिक । त्यो त सबै केटाले मायाको गणितमा लाइन मार्दा प्रयोग गर्ने पुरानो फर्मुला हो । सुन्दा सुन्दा वाक्क भैसकेँ ।’
‘त्यो त भन्दै भन्दिन । आइ नो, यु आर सविता फ्रम पोखरा ।’ मेरो बारेमा सबै जानकारी भए झैँ भन्यो उसले ।
‘ओके, त्यसो भा म पनि तिमीसँग बोल्दै बोल्दिन । वि विल बी ब्लक्ड ।’
‘नाम के हो हजुर ?’
‘घर कहाँ ?’
म सोध्दै गएँ । उसले जवाफ फर्काउँदैगयो । यसपटक पहिले झँै लाडिएन ।
‘कहाँबाट पायौ त नम्बर ?’
‘अस्तिको सेमिनारमा रजिष्ट्रेसन गर्दा तिमी भन्दा पछि थिएँ नी ।’
‘हाहाहाहा ’ हाँसो रोक्नै सकिन । उ यसअघिका फोनमा जिस्किएको मात्रै रहेछ । तर गलत नै त लागेन । बिस्तारै नियमित जस्तै फोनकल हुन थाल्यो । र अहिलेसम्म पनि । त्यत्तिकै हाँसिमजाक गरिरहन्छ फोनमा । ‘ब्लफ कल’ बाटै चिनियो मसँग । उसका सुरुका ब्लफ कल झर्को लाग्दो भए पनि उसको नियतमा खोट देखिनँ । आखिर प्रिय लाग्यो त्यही ‘ब्लफ कल’